बिपा सम्झौताप्रति अधिकांश दल सकारात्मक / माओवादीको ध्वंसात्मक क्रियाकलाप बन्द हुने विश्वास | Business and Economy of Nepal
बिपा सम्झौताप्रति अधिकांश दल सकारात्मक / माओवादीको ध्वंसात्मक क्रियाकलाप बन्द हुने विश्वास
Posted on October 23, 2011 by Babukrishna	बाबुकृष्ण महर्जन,लक्ष्मण वियोगी, (काठमाडौं),
नेपाल भारत सम्पन्न ‘द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा सुरक्षण (बिपा) सम्झौताप्रति अधिकांश राजनीतिक पार्टीहरु सकारात्मक छन् । नेपालमा विदेशी लगानीको टट्कारो देखिएको अवस्थामा भारतसँग लगानी सम्झौता सकारात्मक रहेको नेताहरुको टिप्पणी छ ।
पूर्व अर्थमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका नेता डा. रामशरण महतले माओवादी सरकारले विदेशी लगानीको सुरक्षा गर्नु सकारात्मक हो । डा. महतले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो –नेपालले वहुपक्षीय लगानी सुरक्षण सम्झौता (मिगा) गरिसकेको अवस्थामा यो सम्झौता किन चाहियो ? तैपनि माओवादीले विदेशी लगानीको सुरक्षा दिने सम्झौता स्वागतयोग्य छ । बिपा सन्धी कुनै नौलो नभए पनि माओवादीमा दार्शनिक परिवर्तन आएकोले माओवादीको ध्वासांत्मक क्रियाकलाप कम हुने डा. महतको टिप्पणी छ ।
प्रधानमन्त्रीले सम्झौता गर्नासाथ लगानीको ओइरो आइहाल्ला भन्नु गलत रहेको बताउँदै अर्का पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले भन्नुभयो – ‘माओवादी सरकारले विदेशी लगानी ल्याउन सम्झौता गर्नु सकारात्मक हो । नेपालमा अझै पनि अन्य राष्ट्रहरुको तुलनामा लगानीमैत्री वातावरण रहेको डा. लोहनीले बताउनुभयो । हूलदंगा हुनासाथ क्षतिपूर्ति दिनु गलत हो । भारतीय लगानीलाई राष्ट्रिय व्यवहार गर्ने भनिएको छ । यो कुरा सन् १९५० को सन्धीमा पनि रहेको लोहनीको भनाइ छ । नेपालमा लगानीको पहिलो आधार समयमा संविधान बन्नु र स्थिर सरकार बन्नु रहेको उहाँले स्पस्ट पार्नुभयो ।
पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको सरकारले नै बिपाको मस्यौदा तयार पारिएको टिप्पणी गर्दै पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले पहिलाको बिपा सम्झौताको मस्यौदामा गैर आर्थिक नोक्सान व्यहोर्न सक्दैनौ भनेर हस्ताक्षर नगरेको प्रष्ट पार्नुभयो । ‘पुरानै अवस्थामा कुनै संशोधन नगरीकन हस्ताक्षर भएको छ भने यो नेपालको हितमा छैन ।’×– उहाँले भन्नुभयो ।
भारतसँगको बिपा सम्झौता नौलो नभएको अर्थविद् डा. पुष्पराज कँडेलले बताउनुभयो । ‘सम्झौता भारतीय लगानीलाई मात्र सुरक्षा र क्षतिपूर्ति दिने जस्तो देखिन्छ । उही पार्टीले हडताल र बिद्रोह गर्दै आएको छ । यसमा सुरक्षाको प्रत्याभूति हास्यास्पद हो’ –डा. कँडेलले भन्नुभयो कस्तो र कतिसम्मको लगानीलाई क्षतिपूर्ति दिने भन्ने प्रश्न उठ्छ । उताबाट लगानी ल्याउने यताबाट क्षतिपूर्ति तिर्दै पठाउने हो भने लगानीको अर्थ नहुने उहाँको टिप्पणी छ ।
यसै गरी नेपाल आर्थिक संघका पूर्व अध्यक्ष प्रा. डा. मदनकुमार दाहालले नेपालसँगको बिपा सम्झौतामा लगानीको क्षतिपूर्ति नयाँ कुरा जोडिएको बताउनुभयो । भारतले माथिल्लो कर्णालीमा भएको आक्रमण र पूर्व राजदूतमाथि भएको दुव्र्यवहारको कारणले पनि क्षतिपूर्तिको कुरा उठाएको हुन सक्ने उहाँको थप टिप्पणी छ ।
केही राजनीतिक वृतबाट नकारात्मक टिप्पणी आए पनि बिपा सम्झौताका विषयमा उद्योगी व्यवसायीहरुले सकारात्मक टिप्पणी गरेका छन् । यसै क्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले द्विपक्षीय लगानी प्रबद्र्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिपा) राम्रो कुरा भएको बताउनुभयो । लगानीको सुरक्षा नभएसम्म वैदेशिक लगानी आउनेवाला छैन । सरकारले लगानीको सुरक्षा गर्छु भनेको छ, यो राम्रै हो, –पूर्व अध्यक्ष जोशीले भन्नुभयो । बिपामा मुख्यतया लगानीको सुरक्षा गर्ने कुरा राखेको छ, यो सैद्धान्तिक र आधारभूत कुरा भएको उहाँको धारणा छ ।
भारतले हालसम्म ६२ देशसँग बिपा सम्झौता गरेकोमा ५० देशसँग यो सम्झौता कायान्वयनमा ल्याइएको छ । भारतले दक्षिण एसियामा बिपा सम्झौता गरेको नेपाल दोस्रो राष्ट्र हो । यस अघि श्रीलंकासँग यस्तोे सम्झौता भइसकेको छ ।
बिपा सम्झौताका मुख्य बुँदा
– १६ बुँदे बिपा सम्झौतामा युद्ध, आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्व, राष्ट्रिय संकटकालीन अवस्था वा राष्ट्र बिप्लव वा दंगाका कारणले अर्को देशका लगानीकर्ताले नोक्सानी बेहोर्नुपरेमा त्यस्ता लगानीकर्तालाई निजको पुनःस्थापना, हर्जाना र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने ।
– भारतीय लगानीरहेको कुनै उद्योग धन्दामा गैरराजनीतिक कारणबाट घाटा भए नेपाल सरकारले त्यसको क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ ।
– भारतले अन्य केही युरोपेली देशसँग गरेको सम्झौतामा ‘दंगा’ भन्ने शब्द राखे पनि नेपालको सन्दर्भमा भने युद्ध, सशस्त्र द्वन्द्व र संकटकालसँगै अन्य शब्द पनि जोडिएको छ ।
सम्झौताको धरा ५ मा राष्ट्रियकरण नगरिने, उचित र समन्ययिाक क्षतिपूर्ति दिएर सार्वजनिक प्रयोगका लागि बाहेक अधिग्रहण गर्न नपाइने
– सम्झौताको अवधि १० वर्षको हुनेछ । कुनै पक्षले दाबी विरोध नगरेमा स्वतः नवीकरण हुने ।
– लाभांश, व्याज, रोयल्टी सेवा शुल्क र शेयर बिक्रीबाट भएको आम्दानी र आयोजनामा काम गर्ने नागरिकले गरेको आर्जन फिर्ता लैजान पाउने Share this:EmailTweetPrintShare on TumblrLike this:Like Loading...
Filed under: General Tagged: | Baburam Bhattarai, Bilateral Investment Promotion and Protection Agreement (BIPA), BIPPA, Nepal India BIPPA	« नेपालका २५ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि / ६७ लाख जनसंख्या गरिब कर्जाको व्याज दर घटाउः गभर्नर »